Cher Biography kunye nePhoto Profile
I-Cher (eyazalwa ngo-Meyi 20, 1946) ngumculi nomdlali we-career ophumelele kwimisebenzi engaphezu kwama-50. Uphakathi kwabantu abambalwa abaphumelele ama-Emmy, Grammy, kunye ne-Award Academy. Ukuthengisa kwirekhodi yakhe emhlabeni jikelele kuye kudlulela kwizigidi ezili-100, kwaye ufikelele kwi # 1 ubuncinane kwitshati enye yeBillboard yonke iminyaka elishumi kwiminyaka ye-1960 ukuya kuma-2010.
U-Cherilyn Sarkisian owazalwa, ubaba kaKher wayengumqhubi weloli kwaye unina wayengumzekelo kunye nomdlali oyingxenye.
Abazali bakhe baqhawule xa beneminyaka elilishumi nje ubudala. Kamva, unina washada kwakhona waza wazala intombi yesibini. Olu lwalamano lwaphela xa iCher yayisithoba. Unina waphinde watshata ngokuphindaphindiweyo, kwaye intsapho yayidla ngokufudukela kweli lizwe.
Ukushiya esikolweni eneminyaka eyi-16 ubudala, iKher yathuthela eLos Angeles kunye nomhlobo. Wathatha iiklasi zokusebenza waza wasebenza ukuze azuze imali yokuzixhasa. UCher wadibana noSonny Bono ngo-1962 xa ebengumculi wengoma kunye nomphathi wokunyusa umvelisi uPhil Spector . Yamkela isithembiso sikaSonny sokusebenza njengomgcini wakhe wendlu. Ngako oko, wamzisa kumPhilisi wePhil. I-Cher ibonakale kumarekhodi amaninzi njengomculi we-backup kuquka neeRonettes "Yiba Ngumntwana Wanga" kunye nabazalwana abalungileyo '"Ulahlekelwe nguLovin' Feelin '." U-Phil Spector naye wakhiqiza irekhodi lokuqala lika-Cher, ongatshatangayo obizwa ngokuthi "Ringo, Ndiyakuthanda" kwaye wakhululwa phantsi kwegama elithi Bonnie Jo Mason ngo-1964.
Ngasekupheleni kowe-1964, i-Cher isayine isivumelwano sokurekhoda kunye ne-Liberty Records, kwaye uSonny Bono wasebenza njengomvelisi wakhe. Ikhutshwe kwi-ilebula ye-Imperial imprint, isembozo sayo sikaBob Dylan esithi "Konke Ndifuna Ukukwenza," okokuqala ebizwa ngokuba yiCher, yawubetha i-20 ephezulu kwi-chart yase-United States.
UKher noSonny Bono baqhuba umtshato wabo ngasekupheleni kowe-1964.
Wakhuthaza ukuba enze kunye naye njengesibili ngenxa yokuba yandinceda ekwenzeni ukwesaba kwakhe. Phakathi nobunzima bezakhono ngasekupheleni kweminyaka yama-1960, uSonny waqala ukuthandana namanye amabhinqa, kwaye ubuhlobo buqala ukutshatyalaliswa. Ngomzamo wokunqoba iCher, uSonny wamtshata ngokusemthethweni, kwaye umntwana wabo u-Chastity Bono wazalwa ngo-Matshi 4, 1969.
Ekuqaleni kwee-1970, ekuphumeni kwempumelelo kwanjengeenkwenkwezi zethelevishini, umtshato kaSonny noCher waphinde waphathwa. Ngomnyaka we-1974, uSonny wafaka isicelo sokuhlukana, kunye neCher yayixhomekeke kwinkqubo yomtshato. Ukuqhawula kwabo umtshato kwagqitywa ngoJuni 1975. Emva kweentsuku ezine watshata nomculi wengoma uGreg Allman we-Allman Brothers Band kunye no-Elijah Blue owazalwa ngoJulayi 1976. UCher noGreg Allman bahlukanisa ngo-1979. Ngelo xesha, wayehlala Inkokeli ye- Kiss uGen Simmons.
Ngowe-1978, uCherilyn Sarkisian La Piere Bono Allman waguqula igama lakhe kwigama elingaziwayo, iKher. Wayekela ngokukhawuleza umfanekiso womama ongatshatanga kunye nabantwana ababini abasebenza nzima ukuze bazincede yena kunye nentsapho yakhe. Nangona wayenothando oludibeneyo noluntu oluninzi lwabafana abancinane kuma-1980s kuquka iVal Kilmer, uTro Cruise, uBon Jovi ugitarist uRichie Sambora kunye nomkhweli we-bagel oneminyaka engama-22 ubudala, uRob Camilletti, uCher akazange aphinde ashade.
USonny Bono wasweleka ngengozi ye-ski, ngo-1998, kunye neCher yanikela i-eulogy emngcwabeni. Wambiza kuye, "ngumntu ongenakulibaleka" adibana naye. Ngomvuzo kuye, wabamba i-CBS yeTV ekhethekileyo ebizwa ngokuba nguSonny & Me: I-Cher Remembers ngo-Meyi 1998.
Ngenxalenye yokugqibela yee-1960, emva kokuphumelela kwintliziyo yakhe yokuqala, i-Cher elinganiselayo yengqondo ithi "U-Bang Bang (Umntwana Wanditshilela Ngezantsi)" kunye neNtuthuko kaNyana noKher "Ndibe Ngumntwana" kunye ne "The Beat Goes On." Nangona kunjalo, ekupheleni kweminyaka elishumi, i-fortune yezorhwebo ye-duo ne-Cher njengomculi we-solo yaphela.
Ngomnyaka we-1971, iCher yaqalisa ukuqala kwezinto ezininzi ezenzekayo. Iveki yeConny & Cher Comedy yaqala ngoTshoni ngo-Agasti 1971, kunye neCher yayilandela kunye neyokuqala ye-# 1 yokutshatyalaliswa kwayo "Gypsys (sic)", i-Tramps & Thieves. Kwiminyaka emithathu, wakhulula ii-pop hits ezi-10 eziphezulu, kwaye ezintathu zazo zaye zaya ku-# 1.
Emva kwesinye siphelela ekuthandeni kunye neemvavanyo zomculo werwala ngasekupheleni kwee-1970, iKher yakhwela kwi-bandwagon ye- disco yabuyela kwi-10 ephezulu ngokuthi "Thatha Ekhaya." Ukubuya kwakhe kwakunokufutshane, kwaye iqela lakhe elingu-Black Rose elihlukumezile lahluleka ukutshata nge-albhamu yazo enegama elizibiza.
UCher wachitha ezininzi kwiminyaka yee-1980 ukuhlakulela umsebenzi wakhe. Kwiminyaka elishumi ekugqibela, watyikitya kuGeffen Records ukuba aqalise i-third coming return. Ukususela ngowe-1987 "Ndifumene umntu," i-Cher's new mix of pop and rock brought her four more pops, including 1989, "Ukuba Ndingabuya Ixesha," enye yezintandokazi zekonsathi.
Ukumangaliswa kwamaninzi, iCher yayinomculo owodwa owona mkhulu uphindaphinda umkhono wakhe emva kokuphela kokubonakala kwimiba yee-1990. Umdaniso omnye "Ukholelwa" wamukelwa njengenye yeempumelelo eziphambili zomsebenzi wakhe kwaye wanyuka yonke indlela eya ku-# 1. Kwakuyi-hit enkulu emhlabeni jikelele kwaye yazisa iteknoloji yokuzimela ngokuzenzekelayo kumculo we pop. Le ngoma yaqala umtya weentsimbi eziqhelekileyo kwi- chartboard yomdaniso weBillboard eyadluliselwa kwiminyaka eyi-15 elandelayo.
Ngo-2002, iCher yaqalisa ukuhanjiswa kwekonsathi yokuhlaziya. Wayengasethatha umhlalaphantsi ekurekhodini nasekusebenzeni, kodwa wayecwangcise ukuthatha umhlalaphantsi ekutyekisweni kweso sixeko ukuya kwisixeko. Ekuqaleni ihlelwe njengemiboniso engama-49, ityelelo lwandiswe kaninzi. Xa iphelile ngo-2005, uhambo lwe-Cher uhambo lwangaphandle lwaluhamba ngeendlela ezingama-326 kwaye lwalunye lwezhenketho eziphezulu kakhulu ezihamba phambili zifumana i-$ 250 yezigidi. Wayilandela ngeminyaka emithathu yokuhlala yaseLas Vegas eyafumana i-$ 60 yezigidi ngonyaka ukususela ngo-2008 ukuya ku-2011.
Ingaphezulu kweminyaka elishumi emva kokuhamba kwakhe kokuqala kokuhamba, uCher ushaya indlela kwakhona ngo-2014 kwiNdlangu yokubulala i- tour. Emva kwemisebenzi engama-49 edayiswayo, yagqitywa ngenxa yokusuleleka kwengqondo. I-Cher yaqalisa indawo yokuhlala yaseLas Vegas ekuqaleni kuka-2017.
UCher wayefuna ukuba ngumdlali wefilimu ophumelelayo ngaphambi kokufudukela eNew York ngowe-1982, wathatha izifundo zokuqhuba, kwaye waqeshwa ukuveliswa kwe-Broadway kubuya kwi-Five and Dime, uJimmy Dean . Waye ke wanikwa inxaxheba kwifilimu uSilkwood, eyamkela indumiso emangalisayo evela kubagxeki. Ukusebenza kwakhe kwifilimu, iKher yathola i-Golden Globe Award ye-Best Actress Actress.
Ngowe-1987 wawungunyaka obalulekileyo kwiCher's career. Waba neenkwenkwezi ezintathu kwiimviewa zeeFestile ezibandakanya uMsolwa , oogqirha base-Eastwick kunye ne- Moonstruck . Lo mva ube ngumrhweba oshishino kunye no-smash owodwa ofumana iKharityhulam ye-Academy Award ye-Best Actress. Ngokukhawuleza enye yezona zinto zifunwa kwiimifanekiso zefilimu ezama-1980 zafumana i-$ 1 yezigidi ifilimu.
I-Cher's film success success followed. Ifilimu yakhe yo-1990 i- Mermaids yenze impumelelo ethile yorhwebo. Ngonyaka ka-2010 wenza ukubuyiswa okukhulu kwiimboniselo kwiBurlesque . Ingoma yakhe evela kumabhayisikobho, "Wena Wabona 'Ukugqibela Kwam,
I-Cher ibhiyozelwe ngokumela ukuzimela kwabasetyhini kumashishini alawulwa yindoda. Ukhetho lwakhe lokwenza umculo oqaqambileyo, ukufumana i-disco, kunye nokugqithisa okungaqhelekanga. Njengoko umfazi omdala kunokuba atshaye # 1 kwidatha ye pop xa wayeneminyaka engama-52, iCher nayo yabonisa ukuba imida yoshishino lokuzonwabisa iyakwazi ukuguquguquka.
I-Cher isoloko isungula umfanekiso wayo ukulandela imimiselo kwaye ihlala kwindawo ekubonakalayo nangona ukuphumelela kwezorhwebo kwakungekho nto. Ngama-1980 wayebonakalisa ukuchaneka kwakhe njengononwabo ngokuphumelela i-Award Academy. I- New York Times yambiza ngokuthi "uMyenikazi we-Comeback."
I-Cher nayo ithathwa ngokuba yi-icon yoluntu lwase-gay. Ubhiyozelwa ngamadoda angama-gay ngenxa yesimo sakhe sengqondo kunye nokuhlala kwakhe kwindawo yokuzonwabisa. Uhlala ephantsi kwesi sifundo sokuxeliswa ngabaqhubi. I-Cher nayo yamkela uluntu lwase- LGBT xa umntwana wakhe omdala ephuma njengegayarha kwaye kamva waguquka ukusuka kwintombi ukuya kwindoda njengoChaz Bono.
"I-Bang Bang (Umntwana Wanditshilela Ngezantsi") (1966): Ebhalwa nguSonny Bono, le ngoma yaba yinto yokuqala yeCop pop hit njengomculi wedwa okhupha yonke indlela eya kwi # 2. Ngomnyaka ofanayo we-Cher's version, uNancy Sinatra wabhalela isiqulatho esaziwa ngcono nakwixesha. I-Nancy Sinatra inguqulelo ethi "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" yayisetyenzisiwe kwiimpawu zokuqala ze-movie ezithintelayo zokubulala i-Bill Kill Bill Volume 1 kwaye isampuli kwi-3 ephezulu yase-UK ip hit "Shot Down" yi-Audio Bullys ngo-2005.
"Gypsys (sic), iTampamps & Thieves" (1971): Le ngoma yembali yaba ngowokuqala kweCher # 1. ibandakanya ukuxhaswa kweengoma ezivela kwiqela elidumiweyo lokuCoca iCrew Los Angeles. Impumelelo yengoma yaxhaswa ngokubonakaliswa kwintengiso ye-TV Ixesha le-Sonny & Cher Comedy .
"Half-Breed" (1973): Nangona kwakuphikisana kwezinye iindawo kunye neengxelo zeCher ezithengisa ifa lakhe leCherrokee, "iHlf-Breed" yayingu-1. Yayingumntu wesibini oqinisekisiweyo wegolide. Ingoma ibonisa i-Cher's early 1970's peak.
"Ukuba Ndiya Kubuyela Kwixesha" (1989): Ekuqaleni, uCher akayithandi le ngoma, ebhalwe nguDean Warren. Ingxelo, iWarren yawa phantsi ngamadolo wayo yacela uCher ukuba ayibhale. Ingoma yaba yi-# 3 ep hit, kunye nevidiyo yomculo ehamba kunye neCher eyenza kwi-battleship ibonwa njengenye yeyona ndlela ebonakalayo yecandelo layo.
"Kholwa" (1998): Le ngoma kuthiwa yatshalaliswa kwiinyanga kwi-ileta ye-Warner Bros engekho mntu oyifunayo. Ekugqibeleni, inguqu epheleleyo yale ngoma yamkelwa nguKher. Ukusebenzisa iteknoloji entsha yokuzenzekelayo, isandi esahlukileyo somdaniso womdaniso sithatha i-Cher kwi # # kwi-chart ye-single singles kwinqanaba lokuqala kwiminyaka engama-24. Ibhodi yeBillboard ibonisa ukuba ngu-# 1 owodwa ophumeleleyo ngowama-1999, kwaye yiyona nto ibetha kakhulu kwiCher's career.
UMichael W. Smith
Amakhandlela Amatshisa Ezo zibini ziphela: Iingqungquthela zikaEdna St. Vincent Millay
Yam N Book
I-Best Picture Abakwa-Oscar Aba-1930